Kitra: misokatra ny fiaraha-miasan’ny Nino Design sy AS Adema | NewsMada
Kitra: misokatra ny fiaraha-miasan’ny Nino Design sy AS Adema
Par Taratra sur 11/01/2019
Tontosa, omaly alakamisy 10 janoary teny amin’ny foiben’ny Adema teny Ivato, ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny Nino Design International sy ny AS Adema. Ny Nino Design International izay nanonta “maillots” miisa 46 ho an’ny AS Adema ka nampiranty izany. Natokana indrindra ho an’ny mpilalao, ny mpanazatra, ny “staff technique” ary ny mpitsabo ireto fanamiana ireto. Fiaraha-miasa haharitra mandritra ny roa taona ary azo havaozina ny taona 2021.
Nankasitraka ny Nino Design International ny filohan’ny AS Adema tamin’izao fahavitan’ny fanamiana manokana ho an’ny klioba izao ary nanamafy hatrany ny hitohizan’ny fiaraha-miasa. “Fototra lehibe hampandrosoana ny baolina kitra malagasy ny resaka fanamiana ka ankasitrahana indrindra ny Nino izany tamin’ny fanekena izao fifanaraham-piaraha-miasa izao”, hoy ny filohan’ny AS Adema, Randriamialisoa Yves Marius.
Tetsy ankilany, nanambara ny tale jeneralin’ny Nino Design International, Razafimamonjy Jocelyn Alberto, fa mahafaly ny fanampiana ny ekipa malagasy amin’ny fanontana fanamiana toy izao, indrindra fa ireo ekipa manana ny maha izy azy toy ny AS Adema izay nahavita ezaka teo amin’ny sehatry ny baolina kitra malagasy.
Nahita vokatra hatrany
Nanomboka tao amin’ny seksiona Ambohidratrimo ny nahitana ny AS Adema voalohany, tamin’ny taona 1992, ary nahazoany traikefa tao. Nivelatra tsikelikely ny AS Adema ary nahita fandresena maromaro. Nampisongasina ity klioba ity ny nahatafidira azy teo amin’ny dingana ampahefa-dalan’ny fiadiana ny amboaran’ny Caf, andiany faha-11, sy ny naha tompondaka azy tamin’ny fifaninanam-pirenena (DN), ny taona 2002. Manaraka izany ny naha tompondaka ny AS Adema nandritra ny fiadiana ny tompondaka eran-tany n any “Aéroports Francophones”, andiany faha-8, tany Paris, ny taona 2005. Fa taon’ny fahombiazana ho an’ity klioba ity ihany koa ny taona 2006, naha tompondakan’i Madagasikara azy sy ny teo anivon’ny ligin’Analamanga ary ilay fifaninanana antsoina hoe “Super Coupe”. Mbola tompondakan’i Madagasikara ihany koa ny AS Adema, ny taona 2012. Tsy vaotanisa ny fandresena azo tao anatin’izay 26 taona nijoroana izay ary vonona ny AS Adema hampitombo ny vokatra ka hametraka tantara tsara ho an’i Madagasikara, raha ny fanazavana nentin’ny filohany hatrany.
Marihina fa tsy amin’izao fiadiana ny tompondakan’Analamanga izao ihany no hanonta fanamiana ho an’ny AS Adema ny Nino Design International fa hotohizany amin’ny lalao nasionaly sy iraisam-pirenena ihany koa izany.